Vaovao - "Sarotra ny fandefasana" misy fiantraikany amin'ny fandefasana amin'ny vanim-potoana faratampony!
Nandalo mafy ny fandefasana entana nandritra ny vanim-potoan'ny Krismasy.
Nomarihin’i Gao Feng fa ny volana jona ka hatramin’ny aogositra no vanim-potoana faratampony amin’ny fandefasana entana Krismasy, saingy amin’ity taona ity, raha jerena ny mety hisian’ny fahatarana amin’ny fandefasana, dia mazàna ny mpanjifa any ivelany no mametraka mialoha amin’ny alalan’ny fijerena entana an-tserasera sy ny fanaovana sonia baiko. natolotra aloha kokoa noho ny tamin'ny taona teo aloha, ary misy baiko voatazona ao amin'ny trano fanatobiana entana an-trano noho ny fahasarotana amin'ny famandrihana toerana na entana avo be, izay mitondra fanerena amin'ny fiasan'ny orinasa.
Nilaza ny orinasam-barotra vahiny sasany fa noho ny fiakaran’ny vidim-piainana sy ny fitohanan’ny lozisialy iraisam-pirenena, dia hazo krismasy an-tapitrisany no tsy afaka miala ara-potoana ho any ampitan-dranomasina.Ireo orinasa manana fanondranana isan-taona manodidina ny 150 tapitrisa yuan dia tsy maintsy mandany 2 tapitrisa yuan hanofa trano fanatobiana entana mirefy 10.000 metatra toradroa hametahana hazo krismasy.
Marihina fa tamin’ny taon-dasa dia ny faran’ny volana mey ihany no nahazoana komandy ho an’ny taona iray manontolo, saingy tamin’ity taona ity dia nandroso ho amin’ny volana martsa izy ireo.Araka ny fanadihadian’ny mpiasa, ny antony nametrahan’ny mpanjifa ny baiko tamin’ny fiandohan’ity taona ity. Tsy ny baiko niandry sy nijery tamin'ny taon-dasa noho ny valan'aretina ihany, fa ny fiakaran'ny vidin'ny entana sy ny faharetan'ny fandefasana entana noho ny famatsiana logistika iraisam-pirenena.Amin'ny maha-zava-dehibe ny fotoana, ny mpanjifa dia mino fa tsy maintsy mametraka baiko mialoha izy ireo ary arakaraky ny ahazoany ny entana dia ho tsara kokoa ny fiantohana.
Satria niatrika fikorontanan'ny fampandehanan-draharaha ny seranan-tsambo any amin'ny kaontinanta rehetra, dia mpitatitra lehibe maherin'ny 362 no nijanona teo ivelan'ny seranana tamin'ny 24 aogositra, araka ny filazan'ny sehatra fandefasana entana Seaexplorer. ho an'ny angon-drakitra momba ny zava-bitan'ny seranan-tsambon'i IHS Markit, miaraka amin'ny fahasimbana mafy indrindra any Amerika Avaratra, izay nandany 33 ora teo ho eo tamin'ny vatofantsika ny sambo tamin'ny Mey 2021, raha oharina amin'ny adiny valo eo ho eo tamin'ny Mey 2019. Tombanana vaovao avy amin'ny National Retail Federation dia mampiseho ny isan'ny kaontenera miditra any Amerika Avaratra amin'ny volana aogositra, izay mahazatra ny volana be atao indrindra amin'ny fandefasana entana, ary ny fitohanan'ny kaontenera dia hitohy hatrany amin'ny vidin'ny fandefasana.
Raha resaka taonina, dia nihena 3.4 isan-jato eo ho eo ny fangatahana fandefasana entana eran-tany tamin'ny 2020 raha oharina tamin'ny 2019, raha 0.7 isan-jato kosa ny kaontenera, hoy i jia Dashan, tale lefitry ny Ivon-toeram-pikarohana momba ny fitaterana an-drano eo ambanin'ny minisitry ny Fitaterana, nandritra ny lahateny ara-toekarena isam-bolana. "International Logistics and Shipping Situation" natao tao amin'ny Foibem-pirenena ara-toekarena tamin'ny 25 aogositra.Hitombo 4,4% ny fitakiana eran-tany amin'ny 2021, raha toa ka mitombo mihoatra ny 5% ny fitakiana kaontenera. Ny fiaramanidina an-dranomasina manerantany dia hitombo 4,1% amin'ny 2020 raha oharina amin'ny 2019, ary antenaina hitombo 3% amin'ny 2021.
Nasongadiny fa raha ampitahaina amin'ny taona 2019, ny fangatahana fandefasana entana eran-tany dia andrasana hitombo 1% amin'ity taona ity, fitomboan'ny kaontenera 5%, ary ny fitomboan'ny fahafaha-manao sy ny famatsiana kaontenera dia 7.1% ary 7.4% tsirairay avy.Ny haben'ny sambo amin'ny ankapobeny dia haingana kokoa noho ny fitomboan'ny vola, saingy niakatra be ny vidin'ny entana. Araka ny fijeriny, ny fanofana sambo kaontenera, ny vidin'ny tantsambo, ny saram-panelanelanana ary ny vidin-tsolika dia samy nandray anjara tamin'ny fiakaran'ny vidin'ny fandefasana.
Ny angon-drakitra dia mampiseho fa ny vidin'ny fandefasana kaontenera manara-penitra 40 metatra amin'ny lalana atsinanana avy any Shina mankany Etazonia dia mihoatra ny $ 20,000, avo dimy heny isan-taona. 27, dia nanohy nahatratra ny firaketana ambony indrindra tamin'ny isa 4, 385.62, nisondrotra avo efatra heny noho ny ambany tamin'ny taon-dasa.
Raha jerena, ny fototry ny tsy fahampian'ny fahafaha-manao dia ny tsy fahombiazan'ny fitaterana vokatry ny fanakatonana ny seranan-tsambo sy ny tsy fahampian'ny tantsambo. Amin'izao fotoana izao, ny salan'isan'ny fanafoanana ny seranan-tsambo dia 3-5 andro any amin'ny seranana Eoropeana, 10-12 andro any Andrefana. seranana any Etazonia, ary 7 andro eo ho eo any amin'ny seranana atsinanan'i Etazonia.Vao haingana, ny seranan-tsambo Yantian, ny seranan-tsambo Ningbo ary ny seranana Aziatika hafa dia voasakana ihany koa.